Kunamata Kunongedzera Kurwisa Rufu Pamugumo WeBudiriro | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Kunongedzera Kurwisa Rufu Pamucheto WeBudiriro
Kunamata Kunongedzera Kurwisa Rufu Pamucheto WeBudiriro
Nhasi tichange tichitarisana neminamato mapoinzi pamusoro perufu pamucheto webudiriro. Chinyorwa chino chinoita kuti tinzwisise mubhuku ra Johane 10:10 (NKJV) Mbavha haiuyi asi kungozoba nekuuraya nekuparadza. Ini ndakauya, kuti ave neupenyu, uye ave nohwakazara. Muvengi haaizouya kunze kwekuba, kuuraya nekuparadza. Kune vanhu vazhinji kwazvo avo hupenyu hwakagurwa pavari padyo nekubudirira.
Kuti murume achange achishanda asinganeti kuti ave mukuru muhupenyu, achashingirira masikati nehusiku kuitira kuti ave chinhu chikuru. Nekudaro, kana iye angori padyo nekuve iye mukuru murume waanga achishandira, kufa kuchauya kwaari. Zvichakadaro, rugwaro runoti mubhuku ra Jeremia 29:11 Nokuti ndinoziva ndangariro dzandinorangarira pamusoro penyu, ndizvo zvinotaura Jehovha, ndangariro dzorugare, dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupei nguva yemberi neramangwana. tarisiro. Pfungwa yaMwari kwatiri ndeyezvakanaka kwete zvakaipa kuti atipe mugumo unotarisirwa. Ndidhiyabhorosi anoedza nepese paanogona napo kuti achinje.
Uyu mutungamiri wekunamatira unopesana nezano remuvengi rekutora hupenyu hwedu kana avharwa kubudirira. Ndinoraira nemvumo yedenga, muvengi haazove nesimba pamusoro pehupenyu hwedu muzita raJesu. Munzira dzese idzo muvengi akaronga kukonzera njodzi muhupenyu hwedu, ndinozviparadza nemvumo yedenga.
Ishe Jesu, ndinokutendai nenyasha dzekuona zuva idzva. Ndinokutendai Ishe netsitsi dzenyu pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinokutendai nezvose zvakanaka zvamakaita muhupenyu hwangu. Ndinokutendai nehurongwa hwenyu hwese hwakanaka kwandiri, ndinokukudzai Ishe Jesu, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinouya kuzorwa nehurongwa hwese uye nehurongwa hwemuvengi kutora hupenyu hwangu. Nekuti zvakanyorwa kuti handife asi ndinorarama kuti nditaure shoko raIshe munyika yevapenyu. Ini ndinouya kuzopesana neese ajenda erufu pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Baba Tenzi, ndinoraira nemvumo yedenga, ndichazadzisa zvinangwa zvangu muhupenyu pasina chipingaidzo muzita raJesu. Mhuka dzese dzisingazivikanwe dzakatumirwa muhupenyu hwangu kubva kuumambo hwerima kuti dzione mafambiro andinoita muhupenyu, moto waMwari Mwari Wamasimba Ose ngauparadze mhuka dzakadai muzita raJesu.
Baba Tenzi, imbwa yese yakaipa yakatumirwa muhupenyu hwangu kuti idye kufambira mberi kwangu muhupenyu, ibate moto panguva ino muzita raJesu. Ndatumira mutumwa waIshe kambani yevavengi vangu, rega moto weMweya mutsvene uvaparadze panguva ino muzita raJesu.
Ndinobvisa hurongwa hwese hwemuvengi kuti andiuraye panguva yekubudirira muhupenyu. Ini ndinouya kuzopesana nesungano yese yerufu pamusoro pehupenyu hwangu nhasi muzita raJesu. Wese murume kana mukadzi ari kuedza kutumira rufu kwandiri, anowira kurufu izvozvi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti mukunde masimba evarume nevakadzi vese vane simba vari mumba mababa vangu namai vanoshanda vachipesana nekufambira mberi kwangu muhupenyu. Ndinonamata kuti nemoto weMweya Mutsvene, munhu akadaro afe muzita raJesu. Hofori dzese dzedzinza rangu dzinouraya vana vakasarudzika, hauzove nechauri pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti dziviriro yenyu ive pandiri. Ndinonamata kuti maziso ako ave pandiri muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti, maziso aIshe anogara ari pane vakarurama uye Nzeve dzake dzinoteerera minamato yavo nguva dzose. Ndinonamata kuti maziso ako edziviriro agare ari pandiri muzita raJesu.
Ishe, ndinonunura zuva rega rega rehupenyu hwangu neropa renyu rinokosha. Ini handichawirwa nemamiriro ezvinhu akaipa muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa kuti hapana chombo chinondirwisa chinobudirira. Ndinoraira kuti hapana zano rakaipa remuvengi pamusoro pehupenyu hwangu richamira muzita raJesu. Chombo chega chega chakagadzirwa nemuvengi kuti chindikuvadze, ndinochidzosera mumapadza manomwe muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti pamusoro pehupenyu hwangu, kuraira nemazano enyu ega amire. Zvirongwa zvese zvemuvengi zvakaparadzwa nguva ino muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinoisa hupenyu hwangu mumaoko enyu, ndinonamata kuti mweya wenyu unditungamirire. Mhando dzose dzehuipi dzinorehwa pamucheto webudiriro, ndinodziparadza nemoto wemweya mutsvene. Nzira dzese dzekukanganisa, kuneta kana kuneta dzinoparadzwa nemoto weMweya Mutsvene muzita raJesu.
Ishe Jesu, hupenyu hwangu huri mumaoko enyu. Ndinoda kuti uichengetedze. Ini handikundikane chinangwa muzita raJesu. Ini ndinopikisana nehurongwa hwese hwemuvengi kuti ndiite kuti ndikundikane chinangwa nekundiuraya pamucheto webudiriro, ndinouya pakurwisa zvirongwa zvakadaro nesimba muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti muropafadze maoko angu eBudiriro. Zvese zvandinoisa maoko pamusoro zvichabudirira muzita raJesu. Ini ndinopesana nemweya wekutadza pamusoro pehupenyu hwangu. Ndinokumbira kuti mundipewo pfungwa yekutonga nyika. Pfungwa inondigadzika padivi yehukuru inosunungurwa kwandiri nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinokumbira kuti mundibatsire kuwana budiriro mune zvese zvandinoita muhupenyu muzita raJesu.
rufu pamucheto webudiriro
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kwete Kukundikana Chinangwa
inoteveraKunamata Points Kupesana Nenjodzi Wasters
Munamato wezuva nezuva wePfungwa Uye Nhumbu